Indawo ebiyelweyo yengcambu zeblower blower, abavelisi, abaFektri - NANTONG RONGHENG INDALO YOKUSINGQONGILEYO KWIZIXHOBO, LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iimveliso ze-Acoustic>Umzi-mveliso Wenziwe Sheet Metal Work Generator Ukuvalelwa kwesandi
Ukuvalelwa kwesandi kwimibhobho blower
I-SIC yechungechunge lokuvalelwa kwesandi luthotho lwemveliso engasindi ephuhliswe yinkampani yethu ukuphucula imeko ye-acoustic kunye nolondolozo lwezixhobo kwingxolo yeentlobo ezahlukeneyo zezixhobo ezifana ne-air compressors, ii-roots blowers, i-screw compressors, iimpompo ezinkulu zamanzi, iimpompo zokucoca, njl.
SIC series isandi ebiyelweyo, egxile lula, isakhiwo elula bhetyebhetye, lula ibattery, iindleko zokuhamba kunye nokusetyenziswa.
● Ukungenisa umoya kunye nokusasaza ubushushu: uxinzelelo oluqinisekileyo lokunyanzelwa komoya, ukusebenza kakuhle kokungenisa umoya, ubomi obude bomoya ophefumlayo;
● Ukungenisa umoya kunye nesileli: Akukho nanye, kusetyenziswa uyilo lwe shutter;
● Indlela yokubekwa: ukubekwa ngaphakathi;
● Inkangeleko entle: isixhobo sangaphandle sekhava sinokwenziwa ngokwezixhobo ezahlukeneyo;
● Ukupholisa: indawo yokupholisa amanzi yomoya obethwayo igcinwe;
● Ukugcinwa okufanelekileyo: isakhiwo esihlangeneyo, isiciko esisuswayo, kulula ukusigcina;
● Ulawulo olulula: kukho izixhobo ezikwisiza kunye neendlela ezihambelanayo ngaphandle kwekhava, unokujonga imeko yokusebenza kwezixhobo zangaphakathi ngaphandle kokuvula
● Ukufakwa ngokulula: ulwakhiwo olulula, kunye nedayagram yokufaka indawo eneenkcukacha, abathengi banokuyifaka ngokwabo;
Umthamo wenqanaba lokuncitshiswa: ibhendi yamaxesha aphantsi 10 ~ 12dB (A); aqhelelkileyo ingxolo 12 ~ 20dB (A);